Izoqhubeka nomsebenzi induna eyabekwa yiSilo
INDUNA yezintombi zoMkhosi woMhlanga uNksz Dolly Masango neSilo samaBandla esambeka ukuthi ahole ezinye izintombi nokuyinto afisa ukuyenza ngenhlonipho yize sesikhotheme. Isithombe: SITHUNYELWE
Bongiwe Zuma | March 22, 2021
INTOKAZI eyakhethwa yiSilo Samabandla ithi izokwenza konke okusemandleni ukuthi umcimbi wodumo KwaZulu, uMkhosi woMhlanga, awushabalali.
UNksz Dolly Masango (31) waKwaKhangela, KwaNongoma, osebenza embuthweni wezokuvikela kuleli, waqala ukuhambela uMkhosi woMhlanga eneminyaka ewu-14, waqokwa wuNgangezwe Lakhe ngo-2010 ukuba kube nguyena induna yezintombi jikelele.
Uthe ngaphandle kokuba yintombi, ukhule efundisekile ngemithetho yasendlunkulu futhi neSilo besazi ukuthi uma simthuma umyalezo ezintombini, uzofika ngendlela esifisa uzwakale ngayo.
Ukukhothama kweSilo uNksz Masango uthe kushaye kwezwelwa kodwa uyaziqinisekisa ezinye izintombi ukuthi akuzophela ngoMkhosi woMhlanga ngoba ikhona indlunkulu futhi basazokuthola ukwesekwa njengoba bekuhlala kwenzeka.
"ISilo besifana nobaba kithina sonke nendlela ebesisikhulisa ngayo, ngisho sesihlangane besisikhombisa uthando siseseka ngazo zonke izindlela. Ngeke ngingakuvezi ukuthi indlunkulu yonke beyisinakekela uma sesifike esigodlweni," kusho uNksz Masango.
Eqhuba, uthe inhlonipho nokuthandana kwezintombi ngenye yezinto iSilo ebesihlala siyigqugquzela nobekwenza kuhlale kuvunywa ingoma futhi kusinwa ndawonye eMhlangeni.
"Egameni lezintombi zonke, silimele kakhulu ngokukhothama kweNgonyama, kubuhlungu kodwa sinamazwi asikhuthazayo. BesineNkosi ebisithanda, ikhuthaza isiko nokuthandana sisodwa. Yithina esesiyizintombi ezindala okumele simele iqiniso, siqinisekise ukuthi izimfundiso zeSilo ziyaqhubeka, sibuyise ithemba kulezi zingane ezisencane, simele iqiniso ngebesikufundiswa yiSilo," kusho uNksz Masango.
Ephetha, uthe iSilo besike senze into engajwayelekile ngesikhathi kuhlangenwe. Kuvuke izifo ezahlukene kwezinye izintombi kodwa sikwazi ukumelana nazo, sehlise nomoya kwabanye ukuze bengaxwayi. "Bekuke kwenzeke izintombi zivukwe ukuhayiza kodwa iSilo sivele senze isimanga, sisikhulekele. Bekungabizwa bathandazi uma kwenzeka lokhu. Sonke besithola uthando olusifanele, angabibikho nophuma endleleni ngesimo somunye,“ kusho uNksz Masango.
UNksz Masango uthe bazolinda indlunkulu ngezinhlelo eziqhubekayo njengoba bebehlala benza. Ezintombini nto, uthe ukuziphatha kahle nokuzigcina kusezandleni zazo.